दावाले पञ्चसामु एक वोतल रक्सी राखेर शिर उठाइदिए राजेश पायल राईको – eSidhakura
२ हवल्दारसहित १३ जना जवान सम्पर्कविहीन
जब एक युवतीले १०० मा कल गरिन, त्यसपछि जे भयो
के तपाइँ पनि बिहे गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यो फारम भर्नुहोस्
बजारमा नक्कली मह, बल्ल सचेत गराउँदै खाद्य विभाग
युवकले प्रेमिकाकी आमालाई कि’ड्नी दान गरे, महिना नबित्दै प्रेमिका अर्कै केटासँग टाप
ओ’मिक्रोनले नै को-भि’ड महामारी अन्त्य गराउँछः डब्लूएचओ
सबै सम्पत्ति बेचेर ६ करोड ४० लाख विद्यालय र विद्यार्थीका लागि दान गर्ने पूर्णरामले संसार छोडे
मुख्य पृष्ठसमाचारदावाले पञ्चसामु एक वोतल रक्सी राखेर शिर उठाइदिए राजेश पायल राईको
दावाले पञ्चसामु एक वोतल रक्सी राखेर शिर उठाइदिए राजेश पायल राईको
काठमाडौं । चर्चित गायक राजेश पायल राईमाथि भएको दु’र्व्य’वहार पछिको विवा’द साम्य भएको छ । गायक राई माथि आ क्रम’ण गर्ने दावा पासाङ शेर्पाले मा’फि मागेसँगै उक्त विषय साम्य भएको हो । जनवारी दुई अर्थात आइतबार अमेरिकास्थित न्यूयोर्कमा पञ्च भलादमी सहितको उपस्थितमा शेर्पाले गायक राईलाई एक बोतल र’क्सी राखेर क्ष’मा मागेका थिए ।
किरात समुदायको परम्परागत संस्कार अनुसार कसैले गल्ती गरे समाज (पञ्च)सामू एक वोतल र’क्सी राखेर (माफि माग्नु) ढोगवेद गरे मेलमिलाप हुने अर्थात क्षमा दिने गरिन्छ । जसलाई किरात समुदायमा ‘शिर उठाउने’ भनिन्छ । गायक राई माथि प्रस्तुति दिँदै गर्दा स्टेजमै आ क्रम’ण गरिएपछि उक्त विषयले सामाजिक संजाल तथा सांगीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको थियो ।
उक्त घटनप्रति संगीतसँग सम्बन्धित विभन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुले घोर भ’त्र्सना गरेका थिए । उता आ क्रम’णमा परेका राईले भने कुनै पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिएनन् । बरु उनले पछाडीबाट आएका अंगा’लोहरु स्वीकार्य रहेको। तर अगाडिबाट आएको ज्वा’लामुखी पनि नि’ल्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त विषयमा आयोजकले भने शेर्पा राजेशको फ्यान भएकोले उनले अंगालो मारेको स्पष्टिकरण दिएको थियो ।
बिदेशमा आफ्नै व्यवसाय भएका शर्माको घरको आँगन टेक्नै लाग्दा….
यहीँ वर्ष पूरा होला तिङ्कर जोड्ने घोरेटो बाटो ?
साउदीमा कोठाभित्र बि’रामी अवस्थामा छ’ट्पटाइरहेका रानाको उद्धार
७ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका सम्धी सम्धिनीले गरे बिवाह, बहुविवाह क’सूरमा पक्राऊ
पठाओ राइडरलाई धापाखेल पुर्‍याएर लु’टपाट गर्ने दुई जना पक्राउ